Channel Mandalay .
Download လိုပါ နှိပ်ပါ
The Reckoning (2021)
'\_'\_\_\_' Review Is Coming soon\_\_\_'\_''
Saint Maud (2021)
ဒီဇာတ်ကားကတော့ crime ဆန်ဆန်အက်ရှင်ကားမှ ကြိုက်သူများအတွက်အကြိုက်တွေ့မယ့်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်
မိုက်ဟာ အမည်ခံကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီး စတော့ရှယ်ယာကစားတဲ့တရားမဝင်အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
တစ်နေ့မှာတော့ မိုက်ဟာအလုပ်ကိစ္စသွားရင်းလူသတ်မှုနဲ့ထောင်ချောက်ဆင်ခံလိုက်ရကာ ထောင်ကျခဲ့ရပါတယ်
ဘယ်သူကသူ့ကို ဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုတာကို လက်စားချေဖို့ လိုက်လံစုံစမ်းပါတော့တယ်
Below Zero Bajocero (2021)
IMDb Rating – 6.3/10
CM ပရိသတ်ကြီး အကြိုက်တွေ့မယ့် Action, Crime ဇာတ်ကားတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
မာတင်ဟာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာတတ်တဲ့ ရဲတစ်ဦးပါ။ တစ်နေ့ သူပြောင်းတဲ့ ရဲဌာနမှ
ပထမဆုံးတာ တာ၀န်အနေနဲ့ အကျဉ်းသားတွေကို နေရာပြောင်းရွှေ့တဲ့ တာ၀န်ကို ထမ်းဆောင်ရပါတော့
တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ မာတင်ဟာ သူအပါအ၀င် နောက်ထပ် ရဲ ၃ ယောက်နဲ့အတူ အကျဉ်းသား ၆ ယောက်ပါတဲ့
အချုပ်ကားကို မောင်းပြီး မြူဆိုင်းတဲ့ ညဘက်မှာ တာ၀န်ထမ်းဆောင်ရပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ မောင်းလာရင်း လမ်းခုလတ်မှာ ကားဘီးကလည်းပေါက် အရံလိုက်လာတဲ့ ရဲနှစ်ယောက်ရဲ့ကားနဲ့လည်း
အဆက်ပြတ်သွားတဲ့အတွက် သူကိုယ်တိုင် မောင်းလာတဲ့ ကားပေါ်က ဆင်းကြည့်တဲ့အခါ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခံ
နေရပြီဆိုတာ သိလိုက်ရပါတော့တယ်။ အရံပါလာတဲ့ ရဲ ၃ ယောက်ကလည်း ကျ အချုပ်ကားထဲက အကျဉ်း
သား ၆ ယောက်ကလည်း စပြီး ပုန်ကန် အပြင်ကရန်သူတွေက တစ်ဖက်နဲ့ မှောင်မဲပြီး လူသူကင်းတဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ
မာတင်တစ်ယောက် ဘယ်လို နှစ်ပါးသွားမလဲဆိုတာကို စိတ်၀င်စားဖွယ် မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့ကမှ ထွက်ရှိလာတဲ့ Action ကားသစ်ဖြစ်ပြီး IMDb Rating 6.3/10 ရရှိထားတဲ့ ကားကောင်း ကားသစ်
တီလူဂူးဇာတ်ကားလေးတွေကို မျှော်နေကြတဲ့ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းရုပ်ရှင် ပရိတ်သတ်တွေအတွက် မနေ့ကထွက်တဲ့
Ravi Teja နဲ့ Shruti Haasan တို့ရဲ့ ဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Krack ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုက သူတို့ဘာသာစကားမှာ “ခေါင်းမာတဲ့သူ”ပါ။
ဒီတော့ ဒီရုပ်ရှင်ထဲက အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ ဗီရားရှန်ကာဆိုတဲ့ ရဲအရာရှိဟာ မတရားမှုတွေကို
ကိုင်တွယ်ရာမှာ ကြမ်းတမ်းတယ် ၊ သက်ညှာမှုကင်းမဲ့တယ်။
ဘယ်အရာကိုမှ မကြောက်တတ်ဘဲ လုပ်စရာရှိတာကို ခေါင်းကြောမာမာနဲ့ တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်သူပေါ့။
ဇာတ်လမ်းအစအစမှာ ပြသွားတဲ့ သံတစ်ချောင်း ၊ ၅၀တန် အကြွေတစ်ရွက်နဲ့ သရက်သီးတစ်လုံးဟာ ဗီရားရှန်ကာကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့
ဒိတ်ဒိတ်ကြဲလူဆိုး လူရမ်းကားသုံးယောက်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတာ ဇာတ်လမ်းအလယ်လောက်ရောက်မှ နားလည်မယ်။
တစ်ယောက်ချင်းစီကို ကိုယ်တွယ်ပုံဟာ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ frame ဖြစ်ပြီး ၊
တောင်ပိုင်းရုပ်ရှင်အထွက်နည်းလှတဲ့ အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ရဲကားကောင်းကောင်းကြည့်လိုသူတွေအဖို့
Pirates of the Caribbean On Stranger Tides(2011)
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides(2011)[1080P5.1CH]
((((ဒီဇာတ်ကားတွေက ဘယ်အချိန်ပြန်ကြည့်ကြည့် မရိုးနိုင်တဲ့ စာရင်းထဲပါလေတော့ Pirates of the Caribbean ပရိတ်သတ်တွေအတွက် HEVC,1080P5.1CH,720Pြ ဖင့် ရသမြောက်စွာ
ဂျက်နဲ့ လူမှားပြီး ဂစ်ဘ်ကို ကြိုးပေးမယ့်အရေးမှာ ဝင်ကယ်ပေးလိုက်ရပြီးတဲ့နောက် တစ်ကိုယ်တည်းကောင်းစားနေတဲ့ ဘာဘိုဆာဆီ
ရောက်သွားကြပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဂစ်ဘ်ပဲကျန်ခဲ့ပြီး ဂျက်ကတော့ သူ အချစ်ဟောင်း အန်ဂျလီကာကောင်းမှုနဲ့
မုတ်ဆိတ်နက်ဆီရောက်သွားတဲ့နောက် စပိန်တွေက တပန်းသာနေတဲ့ ထာဝရသက်ရှည်ရေပန်းကို ရှာနိုင်ဖို့ စိုင်းပြင်းရပြန်တယ်…
Pirates of the Caribbean At World’s End(2007)
Pirates of the Caribbean: At World’s End(2007)[1080p5.1ch]
သူရဲကောင်းဆန်ဆန်နဲ့ ကရာကန်ကြီး ပါးစပ်ထဲ ဓားတစ်ချောင်းနဲ့ ဝင်ပြီး အားလုံးကို ပေးဆပ်သွားတဲ့နောက်တော့ ဝီလ်တန်နာနဲ့
အဲလိဇဘက်တို့နှစ်ယောက်သား ကပ္ပတိန် ဘာဘိုဆာနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဂျက်ကို ဒေဗီဂျုန်းဆီကနေ လွတ်အောင် ကယ်ဖို့ ကြိုးစားရတော့တယ်။
ဒါပေမယ့် နှစ်ယောက်မရှိတဲ့ ဂျက်စပဲရိုးက သူ ဘာကောင်လဲဆိုတာကို ဂဏန်းတွေနဲ့ ပုလဲနက်နဲ့ ပြလိုက်တယ်
ဒေဗီဂျုန်းကိုလည်း လော့ဒ် ဘက်ကပ်တ်က ထိန်းချုပ်ထားပြီး ပင်လယ်ပြင်တခွင်တစ်ခုလုံးရဲ့ သင်္ဘောတွေအကုန်ကို
ဖျက်ဆီးခိုင်းတဲ့နောက်တော့ ဝီလ်၊ အဲလိဇဘက်နဲ့ ဘာဘိုဆာတို့နဲ့ အတူ ကပ္ပတိန် ဂျက်စပဲရိုးပါ တိုက်ပွဲထဲ ဝင်ပါလာရတော့တယ်…
မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်ဆိုတဲ့ ဘတ်စ်ကတ်ဘောဘုရင်ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဖခင်ဖြစ်သူလိုမျိုး ဘေ့စ်ဘောကစားသမား ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ။ သူအရွယ်ရောက်ပြီ ဘတ်စ်ကတ်ဘောအားကစားလောကမှာ အထွဋ်ထိပ်ထိ တက်လှမ်းပြီးသွားတဲ့နောက် ဘတ်စ်ကတ်ဘောလောကကနေ ရုတ်တရက်ရပ်နားပြီး ကလေးဘဝကဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဘေ့စ်ဘောလောကထဲကို ခြေစုံပစ်ဝင်လိုက်ပါတယ်။
ဘေ့စ်ဘောမှာအဆင်မပြေပေမယ့် ဘတ်စ်ကတ်ဘောဘုရင်ဖြစ်တဲ့သူ့ကို အဖွဲ့သားတွေကအပြစ်မမြင်ပေမယ့် ပရိတ်သတ်တွေနဲ့မီဒီယာကတော့ ကြိတ်မနိုင်ခံမရဖြစ်နေကြတာပေါ့။ ဒီအချိန်မှာ မိုရွန်တောင်ကဂြိုလ်သားတွေက ဝယ်သူတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ Looney Tunesတစ်ဖွဲ့လုံးကို ဖမ်းဆီးဖို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ သေးကွေးနှေးကွေးတဲ့ဒီဂြိုလ်သားတွေနဲ့ ဘတ်စ်ကတ်ဘောပြိုင်ဆော့ဖို့စိန်ခေါ်လိုက်ပြီးမှ ဂြိုလ်သားတွေဘာလို့ကြီးထွားကုန်တာလဲ။ သူတို့တွေကမိုက်ကယ်ကိုအကူအညီတောင်းတဲ့အခါ ဘေ့စ်ဘောကစားသမားဖြစ်နေတဲ့သူကရော ကူညီပါ့မလား။ Looney Tunesတစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့အတူတူ မိုက်ကယ်ပါ ဂြိုလ်သားတွေရဲ့ အကျဉ်းသားဘဝရောက်သွားမလားဆိုတာကိုတော့… နာမည်ကျော်မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး IMDb 6.4 ရထားတဲ့ ဒီကာတွန်းလေးက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ရယ်ရွှင်မြူးစေမှာဖြစ်လို့ ကြည့်ရှုဖို့လက်တို့လိုက်ရပါတယ်။
Adventure, Animation, Comedy, Family, Science Fiction
ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကြိုးတွေကို တွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်ပေမယ့်
သတိပြုမိတဲ့စိတ် ကသာလျှင် ကျွန်တော်တို့အတွက် လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့ ဦးဆုံးခြေလှမ်း ဖြစ်ရမှာပါ။”
IMDb – 6.6/10 ရရှိထားတဲ့ ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တာမို့ ကြည့်ရှုစေချင်ပါတယ်။
ဆု ၂ ဆု နဲ့ တစ်ကြို ၅ ကြိမ် ဝင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Los Angeles Film Festival 2015 နဲ့ Political Film Society, USA 2015
တို့မှာ ဆု ရရှိခဲ့ပြီးတော့
တော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ နှီးနွယ်တဲ့ စိတ်ပညာကို လေ့လာချင်တဲ့လူတွေ စိတ်ဝင်စားမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါပဲ။
တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူမှု စိတ်ပညာရှင် စတန်လေ မီလ်ဂရမ် ရဲ့ ၁၉၆၁ မီလ်ဂရမ် စမ်းသပ်ချက်ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစမ်းသပ်ချက်ကတော့ လူတွေရဲ့နာခံမှု(Obedience) ကို စမ်းသပ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူစိမ်းနှစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး တစ်ဘက်က သင်ယူသူ တစ်ဘက်က သင်ကြားသူအနေနဲ့ ထားပြီးတော့
မှားရင် လျှပ်စစ်ရှော့တိုက်တဲ့နည်းနဲ့ နာခံမှု ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကို စမ်းသပ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ Obedience ကို သိပ္ပံနည်းကျကျ အချက်အလက်တွေနဲ့ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ကောင်းတာတစ်ခုကတော့ ဒါက ဇာတ်လမ်းသဘောဖြစ်နေတဲ့အတွက် လုံးဝ ပျင်းအိုင်သွားခြင်း မရှိတာပါပဲ။
မီလ်ဂရမ် ဟာ အခြားစမ်းသပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ Small World Experiment နဲ့ Lost letter experiment တို့ကိုလည်း လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
“ကျွန်တော်တို့က ရုပ်သေးရုပ်တွေလို့ ခင်ဗျား ဆိုလို့ ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ အသိဉာဏ် နဲ့ သိတတ်နားလည်မှုတွေပါ ပါဝင်တဲ့ ရုပ်သေးရုပ်တွေပါလို့ ကျွန်တော်ကတော့ လက်ခံယုံကြည်ထားပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော Song Joong Ki ရဲ့ ၂၀၂၁ ကမှအသစ်စက်စက်ထွက်ရှိထားတဲ့ Sci-Fic ဇာတ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
အနာဂတ်ကမ္ဘာကိုစိတ်ကူးယဉ်ပုံဖော်ထားတာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး Setting ချပုံကအစထူးခြားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်
ကင်ထယ်ဟို (Song Join Ki) ဟာတစ်ချိန်တုန်းကအာကာသစောင့်ကြပ်သူတွေရဲ့ ကွန်မန်ဒါခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်
တစ်နေ့မှာတော့ ပေါက်ကွဲနိုင်တယ်လို့ကြေငြာထားတဲ့ နာနိုဘော့နည်းပညာသုံးကလေးပုံစံစက်ရုပ်လေးဟာ
The Yin Yang Master Dream of Eternity (2021)
ဒီတစ်ခေါက် Netflix မှာအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ တရုတ်သိုင်းကားဆန်ဆန်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်
effectတွေလည်းကောင်းကောင်းသုံးထားပြီးတော့ ကြည့်ရတာ တကယ်မိုက်မယ့်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်ကတော့ မကောင်းဆိုးဝါးမြွေဆိုးကိုနှိမ်နင်းဖို့အတွက် ကျင်မင်ဆိုတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးက မြို့တော်ကိုလာခဲ့ပါတယ်
မြွေဆိုးရဲ့အရိပ်တွေက ခဏခဏ လူတွေကြားထဲကိုထွက်လာလေ့ရှိပါတယ်
တကယ့်ခန္ဓာကိုယ်အစစ်ကတော့ ဘုရင်မကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ထိန်းသိမ်းထားတာပါ
ဒီလိုအန္တရာယ်ကျရောက်လာပြီဆိုရင် ဂိုဏ်းကြီးလေးဂိုဏ်းကဆရာလေးဆူ စုပြီးတော့ မြွေဆိုးကိုနှိမ်နင်းရပါတယ်
ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ မြွေဆိုးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစစ်ထွက်လာတော့မှာပါ
ဒါကို ဆရာတွေဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတာ ရင်ခုန်ဖွယ်ကြည့်ရူရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ
တရုတ်သိုင်းကားတွေနှစ်သက်သူအတွက်တော့ ကြည့်သင့်တဲ့ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်လို့ ညွှန်းပေးလိုက်ရပါတယ်
Agent Revelation 2021 ကတော့ Action/Sci-fic/Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ IMDb rating ကတော့ 6.2/10 ရထားပါတယ် ။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင် ကင်နီယန်းလို့ခေါ်တဲ့ ဂြိုဟ်သားမျိုးနွယ်ဟာလူသားတွေကို အက်ရှ်(Ash) ဆိုတဲ့စွမ်းအင်တစ်မျိုးကိုအသုံးချပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကထိန်းချုပ်လာခဲ့တာပါ၊၊ ဒါပေမဲ့ လူသားတွေရဲ့ လောဘကို သဘောပေါက်သွားတဲ့ ဂြိုလ်သားတွေဟာ အက်ရှ်စွမ်းအင်ကို မသုံးပဲ လောဘတရားတွေနဲ့သာ လူသားတွေကို ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က အက်ရှ်စွမ်းအင်သွေးနှောသူ‌တွေကိုအကုန်ရှင်းခဲ့ကြပါတယ်။ မတော်တဆဖြစ်ရပ်တစ်ခုကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာဖွက်ထားတဲ့ အက်ရှ် စွမ်းအင်တွေထွက်လာပြီးတော့
ဂျင်မ်တို့သူငယ်ချင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ခံလိုက်ရတယ်၊၊ အက်ရှ်ကြောင့် သူ့ငယ်ချင်းတွေကို ဆုံးရှံးခဲ့ရတဲ့ ဂျင်မ် ဟာ သူကိုယ်တိုင်တော့ အက်ရှ်ကြောင့် ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ။ အက်ရှ်ရဲ့စွမ်းအင်တွေဟာ သူ့ကိုယ်ထဲစီးဝင်ပြီး သူ့အသွေးအသားနဲ့ တစ်သားထဲ ဖြစ်ပြီး ဂျင်မ်ဟာစွမ်းအားတွေပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်ကိုဂြိုဟ်သားတွေ ကြီးစိုးထိန်းချုပ်လာမှာကိုကာကွယ်နေတဲ့လျို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းကတော့ ဂျင်မ် ကဘာကြောင့် အက်ရှ်ရဲ့ ထိန်းချုပ်ခြင်းမခံရတာလဲဆိုတာကိုစမ်းသပ်ရှာဖွေရင်းနဲ့ ဘာတွေ ဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ သိုင်းအားကစားတစ်ခုရှိပါတယ် လုံချည်တစ်ကွင်းထဲမှာလူနှစ်ယောက်ဝင်ပြီး
သိုင်းချတဲ့ ဆာရွန်သိုင်းချနည်းလို့ခေါ်တဲ့အားကစားတစ်ခုပါ ဒီကားမှာတော့ သိုင်းအားကစားနည်းကိုအခြေခံပြီး
ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒန်နီက ဂျာကာတာက ဆိုးသွမ်းတဲ့သူဌေးသားတစ်ယောက်ပါ
သူ့အမေက သူ့ကိုလိမ္မာလာအောင် မာကာစတာမြို့ကိုပို့လိုက်ပါတယ်
ဆာရွန်သိုင်းအားကစားက အဲဒီမြို့မှာပိုပြီးတော့ထင်ရှားနေတဲ့အချိန်ပေါ့ ဒန်နီက တန်ရီဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီး
တန်ရီကိုတော့ ဆာရွန်သိုင်းချန်ပီယံတစ်ယောက်က အတင်းလိုက်ကြိုက်နေတာပါ
ဒီလိုနဲ့ ဒန်နီနဲ့ ဆာရွန်သိုင်းချန်ပီယံတို့ ပြဿနာတတ်ကြပါတော့တယ် ဒါကြောင့် ဒန်နီက ဆာရွန်သိုင်းသင်ပါတော့တယ်
ဒီဇာတ်ကားလေးကိုလည်း ကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်တာမို့ ကြည့်သင့်တဲ့ကားလေးအဖြစ် ညွှန်းပေးလိုက်ရပါတယ်
ဒီဇာတ်ကားကတော့ လူငယ်တွေ ငယ်တုန်းမှာ လမ်းမှားရောက်တတ်ကြောင်းကို
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်ကတော့ ကျင်ဟွာဆိုတဲ့ ၁၇နှစ်အရွယ်ကောင်လေးက မဟုတ်မခံစိတ်ဓာတ်ရှိပြီး
ရန်ပွဲတွေမှာလည်းဝင်ပါလေ့ရှိပါတယ် တစ်နေ့ လူရိုက်မိပြီး လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးကျောင်းကို ၆လသွားနေခဲ့ရပါသေးတယ်
ပြန်ထွက်လာတော့ သူ့အမေက သူ့ကိုဘဝသစ်စစေချင်ပါတယ် ဒီလိုဘဝသစ်စဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီး
သူက စာမေးပွဲပြန်ဖြေဖို့လုပ်ပါတော့တယ် ဒါပေမယ့် အပေါင်းအသင်းကြောင့်မို့လို့ ဂိုဏ်းတစ်ခုထဲကို ဝင်မိသွားပါတယ်
ထို့နောက် သူ့ရဲ့ဘဝသစ်စမယ့်အစီအစဉ်က မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုပါတော့
ဒီတစ်ခါတော့ IMDb rating 7.1/10အထိရရှိထားတဲ့ Crime, Dramaအမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဥ်းကတော့ ဂျိုဝီဆိုတဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမားတစ်ယောက်ဟာ လူသတ်တဲ့နေရာမှာ လက်ယဥ်ပြီးကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သူ့ကိုအပ်ထားတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကိုကိုင်တွယ်နေတုန်း သူလူသတ်လိုက်တာကို သေဆုံးသူရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်သူကောင်မလေး မြင်သွားပါတယ်။ သူကလည်း မလှုပ်ရှားခင်ကတည်းက ပစ်မှတ်အခြေအနေကိုလေ့လာရင်း အဲဒီကောင်မလေးကိုမြင်မြင်ချင်း ကြွေမိနေတာပါ။ ပုံမှန်ဆိုရင် မျက်မြင်သက်သေကိုပါ လက်စဖျောက်ရမှာဆိုပေမဲ့ သူ့ခံစားချက်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ဂျိုဝီတစ်ယောက် ကောင်မလေးကိုဖမ်းပြီး သူ့အိမ်ခေါ်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့အိမ်မှာဘဲမသတ်ရက်လို့ ဆက်ဖမ်းထားပါတယ်။
လူသတ်သမားနဲ့ မျက်မြင်သက်သေကြားက ထူးခြားတဲ့အချစ်ပုံစံကရော ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ သာမန်အချစ်ဇာတ်လမ်းနဲ့ ထူးထူးခြားခြားကွဲပြားနေပြီးတော့ သူတို့ကြားကဆက်ဆံရေးက ညင်သာမှုတွေ၊ မယုံကြည်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီး သူတို့ဘဝတွေကို ဘယ်လိုပုံစံရိုက်ခတ်သွားမလဲ။ ဇာတ်လမ်းလေးက အလောတကြီးမဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်လေးဇာတ်ရှိန်တက်သွားပြီး အဝေးကြီးထိကြိုမမြင်နိုင်တဲ့ လှည့်ကွက်လေးတွေနဲ့ရိုက်ကူးထားတာကြောင့် ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ကားလေးပါပဲ။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယအက်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသား အာဂျေးလ်ဒေ့ဂမ်၊ အနီးလ်ကပူးရ်၊ မင်းသမီးကန်ဂနာရာနွတ်တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတဲ့
ရထား ဗုံးထောင်ပြီး ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းတဲ့ ကားလေးပါ။
မင်းသားအာဂျေးလ်က အိန္ဒိယကနေ လန်ဒန်ကို အလုပ်လာလုပ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ပါ..
ဘဝတူရွေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့ဘဝကို ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း.. သူကိုယ်တိုင်လည်း အဖမ်းခံ.. နှင်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ချစ်ရတဲ့ မိသားစုကို လန်ဒန်မှာထားရစ်ခဲ့ရပြီး တစ်ကွဲတစ်ပြားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် လက်စားချေဖို့
လန်ဒန်ကိုရအောင် ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရထားပေါ်မှာ ဗုံးထောင်ပြီး ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းခံမှုတွေ
လုပ်ခဲ့ရာက ဒီဇာတ်လမ်း ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။
တောင်းတဲ့ငွေတွေ ရမှာလား.. ခရီးသည်တွေရဲ့ အသက်အန္တရာယ်က
ဘယ်လို ကယ်ထုတ်မှာလဲ စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊ ကြည့်ရှုအားပေးလိုက်ပါဦး
Action, bollywood, Crime, Drama
IMDb Rating – 7.3/10
ဇာတ်ကားအကျဉ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ထောင်ထွက်တစ်ဦးနဲ့ အိမ်တွင်းရေးအဆင်မပြေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်
ရဲ့အကြောင်းပေါ့။ ပါးလ်မာ က ထောင်ထဲ (၁၂)ကျော်နေခဲ့ပြီးမှ ခံဝန်နဲ့လွတ်လာသူဖြစ်ပြီး သူ့အဖွားအိမ်၊ သူ့ဇာတိမြို့မှာပဲ
ပြန်လာနေခဲ့တယ်။ ဆမ် ဆိုတာကတော့ ပါးလ်မာရဲ့အိမ်ဘေးမှာနေတဲ့ ကလေး။ ဆမ့်အမေက ဆေးသမား၊ ပထွေးဖြစ်သူ
ကလဲ အချိုးမပြေ။ မိသားစုအခြေအနေလုံးဝမကောင်းတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်။ ထောင်ထွက် ပါးလ်မာနဲ့ အိမ်တွင်းရေး
အဆင်မပြေတဲ့ ဆမ် တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို ခပ်ငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့ တင်ဆက်သွားတဲ့ Drama ဇာတ်ကားကောင်းလေး
တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Drama ကားမျိုးကြည့်ရတာ စိတ်ထဲအတော်လေး ကျေနပ်သွားမိတယ်။ IMDB rating (7.3/10)
၊ Rotten Tomato ကလည်း (74 %) ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ ပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။
ပါးလ်မာ အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားသူကတော့ အဆိုတော်/သရုပ်ဆောင် Justin Timberlake ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါ comedy-drama ဇာတ်ကားအမျိုးအစားလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် တကယ်ရယ်ရမဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါနော်
ရုံကြီးကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲမှာလည်း ဇကာတင်ဝင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ
လတ်တလောမှာလဲ ထိုင်းကနေပြန် remark ရိုက်ထားတဲ့ My God! Father (2020)ရဲ့မူရင်းဇာတ်ကားလေးပါ
နောက်ခံတီးလုံးကလည်းကောင်း သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း Eddie Peng (Operation Mekong) , Deng Chao (The Mermaid 2016),
Zanilia Zhao (လတ်တလောပြိးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ Legend of fei) တို့တွေဆိုတော့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင် လန်က ကားမောင်းချန်ပီယံတစ်ယောက်ပါ
တစ်နေ့သူ့အဖေနဲ့ ကားအတူတူမောင်းနေရင်း မတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
အဲဒီအချိန်မှာ သူက အချိန်နောက်ပြန် ခရီးသွားပြီး သူ့အဖေရဲ့ငယ်ဘဝကိုရောက်သွားပါတော့တယ်
လန်က အစက သူအဖေနဲ့အဆင်မပြေပါဘူး ဒါပေမယ့် သူ့အဖေငယ်ဘဝကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါ
သားအဖ နှစ်ယောက်က သူငယ်ချင်းဖြစ်လာပါတော့တယ်
ကြည့်ရမယ့် dramaကားကောင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်လို့ ညွှန်းပေးလိုက်ရပါတယ်
ဒိတ်ပျောက်တယ် ဆိုတဲ့ စကားကို လူငယ်တွေ အရမ်းပြောလေ့ရှိပါတယ်
ဒါပေမယ့် တကယ် ဒိတ်ပျောက်သွားတဲ့လူတွေရှိပါ့မလား
ဒီဇာတ်လမ်းထဲက ကောင်မလေးကတော့ တကယ်ဒိတ်ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်
ခရာမတွတ်ခင် ပြေးတတ်တဲ့ သူများတွေထက် ရှေ့ကိုတစ်လှမ်းကြိုပြင်ဆင်တတ်သူလေးတစ်ယောက်ရှိသတဲ့။
အသက်ကလဲ ၃၀ နားကပ်နေပြီး အချစ်ရေးနဲ့ပါတ်သက်လို့ မူးလို့တောင်မရှုဖူးတဲ့သူမအနားကို
အဲ့ကောင်လေးနဲ့ ချစ်သူများနေ့မှာ အတူဖြတ်သန်းဖို့ စိတ်ကူးယဉ်
အပျော်တွေလွန်ပြီး အိပ်သွားခဲ့ပေမဲ့ နောက်တစ်နေ့ သူအိပ်ရာနိုးလာချိန်မှာတော့
သူ့ရဲ့ချစ်သူများနေ့ဟာ သူ့မှတ်ဉာဏ်ထဲကနေ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာ
ဘာကြောင့် နေ့ရက်တစ်ရက် ပျောက်ဆုံးသွားရတာလဲ
IMDb rating 7.4 ရရှိထားပြီး Golden Horse Film Festival တစ်ခုတည်းမှာတင်
Winner5ဆုရရှိပြီး Nomi6ဆု ၀င်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားလဲဖြစ်ပါတယ်။
The Ghost Resort (2021)
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက လမ်းတစ်လမ်းဖောက်ဖို့ အဆောက်အဦပြောင်းဖို့
အခုလည်း ရှိချင်ရှိမှာပါ ဒါပေမယ့်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့
သရဲတစ္ဆေတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလောက်
ရှေးထုံးလည်းမပယ်နဲ့ ဈေးသုံးလည်း မကြွယ်နဲ့ဆိုတဲ့ စကားတောင်ရှိသေးတယ်မို့လား
ဇာတ်လမ်းက နည်းနည်းတော့ drama,thriller အမျိုးအစားဆိုပေမယ့် ဟာသဘက်လည်းနည်းနည်းရောက်တယ်ဗျ
Tamil thriller ငတ်နေတဲ့သူတွေအဖို့တော့
IMDb Rating – 4.0/10
transgenderမလေး နော်မီကို စော်ကားဖို့လုပ်တဲ့လူကို ထိုးကြိတ်ဆုံးမခဲ့ရာကနေဇာတ်လမ်း
စတာပဲ။ အဲ့ဒီမှာပဲ နော်မီက နစ်ခ်ကိုကိုယ်ရံတော်အနေ နဲ့အလုပ်ခန့်လိုက်ပြီး သူ့ဖျော်ဖြေပွဲတွေ
နောက်ကိုခေါ်သွားတာပေါ့။ နော်မီကလည်းအဆိုတော်ဆိုပေမဲ့ စပွန်ဆာတွေနဲ့ အရက်သောက်လိုက်
စကားပြောလိုက်လုပ်ပြီး အဆိုတော်အဖြစ်နဲ့ရပ်တည်နေရတဲ့လူ…………နစ်ခ်ကျတော့ ပြိုင်ပွဲမှာ
ရှုံးပြီး နောက်ပိုင်း ကြိုးဝိုင်းထဲကိုပြန်ဝင်ဖို့မဝံ့ရဲတော့တဲ့လူ…………ဒီလိုလူနှစ်ယောက်ဆုံစည်းပြီးတဲ့
နောက်ပိုင်းမှာ ဘာတွေ ဖြစ်လာမှာလဲဆိုတော့ကိုတော့ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမှာပါ။
ဒီလိုပြောပြီး ကျွန်မကို ကျောခိုင်းသွားခဲ့တဲ့ရှင့်ကို ကျွန်မမုန်းတယ်…..
ပင်လယ်ကြီးရေ..ရှင်ဟာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းလွန်းလှသလို နှစ်သက်စရာလည်းကောင်းပါတယ်
လူကို အံ့ဩစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းတွေရှိတဲ့ သဘာဝကြီးတစ်ခုပေါ့…
ဒါပေမဲ့…. ကျွန်မတော့ ရှင့်ကိုမုန်းပါတယ်”
ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီတစ်ခါတော့ အချိန်တစ်နာရီလောက် မထတမ်းကြည့်လို့ကောင်းမယ့် ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ် ။ ပိုစတာကိုကြည့်တာနဲ့ သောင်းကျန်းတော့မယ့် ငါးမန်းမှန်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ ။ ဒါပေမဲ့ ပရိသတ်ကြီးမသိသေးတာက ဒီကားလေးထဲမှာ သံယောဇဉ်တွေ ၊ လူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေ ပြီးတော့ အရမ်းမိုက်တဲ့ ကွန်ပျူတာအဖက် တွေပါဝင်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ ။
လူငယ်လေးတစ်စု အားလပ်ရက်မှာ ပင်လယ်ဘက်ကို အပန်းဖြေခရီးထွက်လာကြပါတယ် ။ ဘာပြသာနာမှမရှိပေမယ့် အုပ်စုထဲက စုံတွဲတစ်တွဲရဲ့ အချစ်စမ်းမှုတွေကြောင့် စီးလာတဲ့ သင်္ဘောက ကျောက်ဆောင်နဲ့ တိုက်မိသွားပါတယ် ။ ဇာတ်လမ်းက အဲ့ကစတာပေါ့နော် ။
ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမှာ ကယ်မယ့်သူမရှိတုန်း တစ်ခုတည်းသော လုပ်စရာရှိတာက ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုဆီ လက်ပစ်ကူးသွားဖို့ပါ ။ အဲ့တော့ ဒီသူငယ်ချင်းတစ်သိုက် ကျွန်းငယ်လေးဆီရောက်အောင်ကူးနိုင်ပြီး ဘယ်နှစ်ယောက်များ ဇာတ်လမ်းအဆုံးမှာ အသက်ရှင်ကျန်မလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
IMDb Rating – 6.2/10
ဘဝမှာ မိဘတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အစအစအရာရာ ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်။
ဒီကားမှာတော့ ဇိုဝီဆိုတဲ့ကောင်မလေးက သူ့ကောင်လေး တင်မ်နဲ့ မထင်မှတ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်
ရသွားပါတော့တယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ဘဝကို စွန့်စွန့်စားစား ဖြတ်သန်းရတာကိ ကြိုက်တဲ့
သစ်ပင်တက်သမား ဇိုဝီတစ်ယောက်အဖို့ မထင်မှတ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရသွားတာသိလိုက်ရတဲ့အချိန်
အကြီးအကျယ်ကို ရှော့ခ်ရသွားပါတော့တယ်။ ဇိုဝီကောင်လေး တင်မ်ကတော့ ကိုယ်ဝန်ရှိတာ
သိသွားတဲ့ အချိန်ကစပြီး ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့နဲ့ ဇိုဝီကို ဂရုစိုက်ဖို့အတွက် အစွန်းကုန်
ကြိုးစားပါတော့တယ်။ ဇိုဝီရဲ့ ဆန္ဒအရ သူတို့နှစ်ယောက်က ကလေးမမွေးခင်မှာ လုပ်ချင်တဲ့အရာ
တွေကို စပြီးချရေးပါတော့တယ်……သူတို့ကလေးမမွေးခင် သူတို့ဆန္ဒတွေ ပြီးမြောက်သွားမလား၊
မထင်မှတ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရသွားတဲ့ ဇိုဝီတစ်ယောက် ဘယ်လိုကလေးမွေးဖို့ ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာကို
comedy ဆန်ဆန် ကြည့်ရှူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Finding Ohana (2021)
ဒီဇာတ်ကားကတော့ Netflixကအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ
ပီလီနဲ့လိုအန်နီဆိုတဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက်က ဟာဝိုင်ရီမှာမွေးပေးမယ့်လည်း
တစ်နေ့ သူ့အဘိုးရဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်တွေ့ခဲ့ပြီး ဟာဝိုင်ရီကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ ပင်လယ်ဓားပြတွေ
ရတနာတွေဝှက်ထားခဲ့ကြကြောင်းသိခဲ့ပါတယ် သူ့အဘိုးကလည်း ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာတွေကြုံနေရလို့
သူတို့အမေက နယူးယော့ခ်ကအိမ်ကိုရောင်းပြီး ဟာဝိုင်ရီကိုပြောင်းလာမယ်လုပ်ပါတော့တယ်
အဲဒီအချိန်မှာ ပီလီက ပြဿနာတွေပြေလည်အောင်လုပ်ဖို့အတွက် ရတနာသိုက်ရှာမယ်လုပ်ပါတော့တယ်
အဲ့ဒီမှာ ရတနာသိုက်ရှာဖွေရေးထဲကို သူ့အစ်ကိုပါ ပါလာပါတော့တယ်
နာမည်ကြီးမင်းသား Denzel Washington , Rami Malek , jared letoတို့ရဲ့ကားသစ်လေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
လောကမှာ အိန်ဂျယ်လို့ခေါ်လို့ရတဲ့ အပြစ်ကင်းတဲ့လူတွေရော ရှိသေးရဲ့လား။
အမှန်တရားအတွက် ရာဇဝတ်သားတွေကို ဖမ်းဆီးမယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ရဲတွေကရော
The Little Thingsဇာတ်ကားမှာတော့ ရဲအရာရှိ Joe Deaconက သူတို့မြို့က မိန်းကလေးတွေကို
သတ်တဲ့ ကွင်းဆက်လူသတ်မှုကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့သူပါ။
လက်ရှိမှာတော့ဒီအမှုကို တာဝန်ယူထားသူကတော့ စုံထောက် Jim Baxterဖြစ်တယ်။
အစပိုင်းမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ကြား အဆင်မပြေမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ Joeနဲ့ Jimmyတို့နှစ်ယောက် ဒီကွင်းဆက်လူသတ်မှုကို
ရှာဖွေဖို့အတွက် အတူပူးပေါင်းခဲ့ကြတယ်။Jimmyအတွက်ကတော့ ဒီအမှုကသူတာဝန်ယူထားရတဲ့ အမှုအဖြစ်ပေမဲ့ Joeတစ်ယောက်
ဒီအမှုကိုလိုက်နေတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်က သူဖုံးကွယ်ထားတဲ့ ရွံ့စရာအတိတ်နဲ့ပတ်သတ်နေလို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
သက်သေလဲမရှိ သဲလွန်စလဲမရှိတဲ့ ဒီကွင်းဆက်လူသတ်မှုကို Joeနဲ့Jimတို့ဘယ်လိုဖော်ထုတ်ကြမလဲ။
Joeဖုံးကွယ်ထားချင်တဲ့ အတိတ်ကရောဘာလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။
ဒီဇာတ်ကားမှာ မင်းသား Denzel Washingtonက Joeအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး မင်းသား Rami Malekကတော့ စုံထောက် Jimအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
IMDb Rating – 6.1/10
ဒီဇာတ်လမ်းလေးက လူငယ်လေးတွေအကြောင်း အထူးသဖြင့်(၁၉၈၁)ကနေ(၁၉၉၆)ကြားမွေးဖွားခဲ့တဲ့
Generation Y ဒါမှမဟုတ် Millennials တွေအကြောင်းကို ဦးတည်ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုးစားရိုးသားပြီး ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့တရားဝင်အလုပ်ကိုလုပ်ချင်ခဲ့ပေမဲ့ စီးပွားရေးစနစ်ဆိုးကြောင့်
အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ် နေခဲ့ရတဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်စု၊ ချမ်းသာတဲ့လူလက်တစ်ဆုပ်ကပဲထပ်ပြီးချမ်းသာ
နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင့် သူတို့နေချင်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုနေချင်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းမနေခဲ့ရတဲ့လူငယ်တစ်စု၊ ချီကာဂိုက
အချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်ကိုဝင် ပြီးပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူပြီးတော့‌ နေချင်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုဖန်တီးလာခဲ့တဲ့
ဒီဇာတ်ကားလေးထဲကအကြောင်းအရာ တွေက လူငယ်တွေရဲ့ခံစားချက် လူငယ်တွေရဲ့ဘဝကိုဖွင့်ဟပြနေတဲ့
ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်လို့ ထုံးစံအတိုင်းလေးပဲကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုခံစားဝေဖန်ကြည့်ကြပါအုံးလို့……….
The Elfkins BakingaDifference (2019)
=IMDB 6.0 =
မြေအောက်မှာပဲ နှစ်ပေါင်းများစွာနေလာတဲ့ မှင်စာလေး အဲလ်ဖီဟာ
တက်လာပြီးနောက် မုန့်ဖုတ်ဆရာ သီအိုနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်
သူ့ရဲ့မုန့်တိုက်ကိုလိုချင်နေတဲ့ ညီဆီကနေကယ်တင်ဖို့လိုနေတဲ့သူပေါ့။မှင်စာလေးဟာ သူတက်ချင်တဲ့ပညာကိုတက်သွားနိုင်မလား
လူသား သီအိုကရော သူ့မုန့်တိုက်ကို ကယ်တင်နိုင်မလား
Transformers သိပ္ပံအက်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ ဇာတ်လမ်းသစ်အဖြစ်
Transformers: The Last Knight ကို ကျူးဘားနိုင်ငံ မြို့တော် ဟာဗန်နာတွင်
ယင်းဇာတ်ကားသည် Transformers ဇာတ် လမ်းတွဲ၏ ပ ဉ္စမမြောက် live-action
ဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့သည့် Transformers:
Age of Extinction ဇာတ်ကား၏ နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားလည်းဖြစ်သည်။
ယင်းဇာတ်ကားသစ်သည် Transformers ဇာတ်လမ်းတွဲများ၏ ပင်တိုင် ဖန်တီးရှင်
ဒါရိုက်တာမိုက်ကယ်ဘေးရဲ့ လက်ရာ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်သည်။
Transformers: The Last Knight ဇာတ်ကား သစ်တွင် ပင်တိုင်မင်းသား
မာ့ခ်ဝဲလ်ဘတ်ခ်နှင့် သရုပ်ဆောင်အချို့လည်း ပြန်လည်ပါဝင်လာကြပါတယ် …
Transformers သိပ္ပံဇာတ်ကား၏ ဒုတိယ မြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်သည့်
Revenge of the Fallen ကို ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်ကလည်းကောင်း၊
တတိယ မြောက်ဇာတ်ကား Dark of the Moon ကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်ကလည်းကောင်း၊
စတုတ္ထမြောက်ဇာတ်ကား Age of Extinction ကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်က လည်းကောင်း
ဖြန့်ချိပြသခဲ့ပြီး ယခုအခါ ပ ဉ္စမမြောက်ဇာတ်ကားကို ယခုပြသ လျက်ရှိကာ
Transformers6ကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် ပြသသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Transformers ဇာတ်ကားများအားလုံးသည် ဝေဖန်သူများ၏ အပြုသဘောမဆောင်သည့်
တုံ့ပြန်ချက်များကိုသာ လက်ခံရရှိခဲ့သော်လည်း ယနေ့ထက်တိုင် ရုံဝင်ငွေအားကောင်းလျက်ရှိပြီး
ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကတွင် အောင်မြင်နေဆဲ ဇာတ်ကားများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Action, Adventure, Sci-Fi, Transformers
Transformers Age of Extinction (2014)
Transformers တွေကြောင့် Chiacago မြို့ ပျက်ဆီးခဲ့ရတယ်လို့ အစိုးက အပြစ်တင်ပြီး၊
Autobots တွေရော Decepticons တွေကိုပါလိုက်ဖမ်းဆီးနေပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ Mark Wahlberg က Optimus Prime ကိုအမှတ်မထင် ရှာတွေ့သွားရာက
သူ့ကို လိုက်ရှာနေတဲ့ အစိုးရအဖွဲအစည်းတွေနဲ့ အခြားဂြိုလ်သားတွေရဲ့ ပစ်မှတ်ဖြစ်လာပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ Mark Wahlberg တို့မိသားစုနဲ့ Autobots တွေပေါင်းပြီး အဖြစ်မှန်ကို စုံစမ်းရာမှာ၊
US အစိုးရက Transformer တွေကို ကိုယ်တိုင် တီထွင်နေပြီးတော့၊
Control လုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေသလို၊ Transformers Army လုပ်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ယူသုံးနေတဲ့ Sample တွေက Megatron ရဲ့အစိတ်အပိုင်းနဲ့ ဦးနောက်တွေဖြစ်
နေပြီးတော့၊အမှတ်မထင်ပဲ Megatron ကို အသက်ပြန်သွင်း နေသလို ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဘယ်လို
~ Review Credit
Transformers Dark of the Moon (2011)
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့…….. စိုင်ဘာထရွန် စစ်ပွဲများကြားကနေ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ စိုင်ဘာထရွန်ဂြိုလ်က အာကာသယာဉ်ကြီးက လရဲ့အမှောင်ဘက်ခြမ်းကို ပျက်ကျသွားခဲ့တယ်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန် အာကာသယာဉ် ‘အပိုလို ၁၁’က လကမ္ဘာပေါ်ကို ဆင်းသက်ပြီး The Ark ရဲ့နမူနာတွေကို ကောက်ယူခဲ့တယ်။ အော့(ပ်)တီးမတ် (စ်)ပရိုင်းက တိုင်လုံးတွေကို ရှာဖွေပြီး စင်တီနယ်ပရိုင်းကို အသက်ပြန်သွင်းဖို့ လပေါ်ကို သယ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အခုလို သယ်ဆောင်ခြင်းက ကမ္ဘာမြေကို ကျူးကျော်တိုက်ခိုက် မယ့် ဂြိုလ်သားစစ်တပ်အတွက် ဆောင်ရွက်နေတယ် ဆိုတာကို အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ရှားလော့(တ်)မီးရင်းသိရှိသွားတယ်။ ဒီဆက်(ပ်)တီကွန်က The Ark ယာဉ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ စောင့်ဆိုင်းခဲ့တယ်။ အော်တိုဘော့တွေက ကမ္ဘာမြေကနေ ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးခံရတယ်။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို အခြေတည်ပြီး အက်ရှင်ဇာတ်ကား အဖြစ်ပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်……..။~ Review Credit
Transformers Revenge of the Fallen (2009)
ဆမ် ဝစ်ဝစ်ကီ က အော်တိုဘော့တွေနဲ့ကျောခိုင်းပြီးတော့ သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့
နေထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ကောလိပ် တက်ဖို့သွားခါနီးမှာဘဲ ပထမ Transformers
တုန်းကကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ကုဗတုံး ရဲ့စွမ်းအင်အပိုင်းအစလေးကိုထိမိတဲ့အခါမှာတော့
မထင်မှတ်ထားတဲ့ သင်္ကေတတွေကို မြင်မိပြီးတော့ ဒီဆပ်တင်ကွန် တွေရဲ့ ပစ်မှတ်က
True and False Monkey King ( 2020 )
စွန်းဝူခုံးကားလို့ပြောလိုက်ရင် မသိတဲ့သူရှားလောက်အောင် လူသိများပြီ
း ဝက်ဝက်ကွဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါနော် ဇာတ်လမ်းရှည်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့
စွန်ဝူခုံးကားဟာဆိုရင် အနောက်ဖက်ကို ပိဋကတ်ကျမ်းသွားယူရာမှာ
အဲ့ပြဿနာတွေထဲကမှ စွန်းဝူခုံးနောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာတဲ့ အပိုင်းကို
အားလုံးနီးပါး မှတ်မိလောက်ပါတယ် ဒီ movieလေးမှာတော အနှောင့်အယှက်တွေထဲကမှ
စွန်ဝူခုံးအတုတစ်ယောက်ပေါ်လာတဲ့ အခက်အခဲကို အကျယ်ချဲ့ရိုက်ပြထားတာပါ
ဒီကားလေးမှာ ထူးခြားတာကတော့ စွန်းဝူခုံးအတုဖက်ကို အသားပေးရိုက်ကူးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်
သူချစ်ရသူအသက်ကို ကယ်ဖို့အတွက် စွန်းဝူခုံးအဖြစ်ဟန်ဆောင်ရာကနေစတာပါ
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို စွန်းဝူခုန်းအတု လျှို့အာဖက်ကနေ ဘယ်လိုမျိုး
ဒီmovieလေးကနေတဆင့် ဆက်လက် ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော်
IMDb (7.0) / Rotten Tomatoes (81%)
ဘောလိဝုဒ်ရဲ့ဘုရင်လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော်မင်းသား ရှာရွတ်ခန်းရဲ့အချစ်အလွမ်းအကြမ်းရသစုံတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။
ရှာရွှတ်ခန်းရဲ့ လူသိများတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Om Shanti Om တို့ Happy New Year တို့ကို ရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့
ဒါရိုက်တာ Farah Khan ရဲ့ ပထမဆုံးရိုက်ကူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး မင်းသားကြီး Sunil Shetty ၊လူငယ်မင်းသားချော Zayed Khan
မင်းသမီး Sushmita Sen နဲ့ Amrita Rao တို့ပါဝင်အားဖြည့်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
Imdb rating 7.0 ရရှိထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကတော့
အိန္ဒိယတပ်မတော်မှ ဗိုလ်ချုပ်ဘတ်က်ရှီးဟာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးယူဖို့ ပထမခြေလှမ်းအဖြစ်
မီလတ်စီမံကိန်းကို လုပ်ဆောင်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ မီလတ်စီမံကိန်းကတော့ အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာ ဖမ်းမိထားတဲ့
မသိနားမလည်တဲ့အပြစ်မဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးမယ့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုစီမံကိန်းကို
သတင်းဌာနတစ်ခုမှ ဗိုလ်ချုပ်ဘတ်က်ရှီးကို အင်တာဗျူးဖို့ ဖိတ်ကြားထားလို့ ဗိုလ်ချုပ်ဘတ်က်ရှီးဟာ အင်တာဗျူးလာရောက်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
အင်တာဗျူးဖြေနေစဉ်မှာ ပါကစ္စတန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရသွားမှာကို မလိုလားတဲ့ အကြမ်းဖက်သမား ရာ့ဂ်ဗန်တို့အဖွဲ့ဟာ သတင်းဌာနကို
ဝင်ရောက်စီးနင်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ဘတ်က်ရှီးကို ကာကွယ်ရင်းနဲ့ မေဂျာရမ်(ရှာရွတ်ခန်း)ရဲ့အဖေ
ဗိုလ်မှူးကြီးရှိတ်ကာဟာ ကျဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရှိတ်ကာဟာ သူ့မှာ မေဂျာရမ်အပြင် လက်ရှ်မန်းဆိုတဲ့ သားတစ်ယောက်နဲ့
မာဒူဆိုတဲ့ ဇနီးတစ်ယောက်ရှိကြောင်း သားဖြစ်သူ မေဂျာရမ်ကို သူကွယ်လွန်ခါနီးအချိန်တွင်ပြောခဲ့ပြီး သူ့အရိုးပြာကို သားနှစ်ယောက်အတူမျှောပေးဖို့
မေဂျာရမ်အား ကတိတောင်းခဲ့ပါတယ်။ မေဂျာရမ်ဟာ သူ့အဖေရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လုပ်နေချိန် ဗိုလ်ချုပ်ဘတ်က်ရှီးမှ သူ့အား
တာဝန်တစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။ ထိုတာဝန်ကတော့ ဒါဂျီလင်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဘတ်က်ရှီးရဲ့ သမီး ဆန်ဂျနာကို ကာကွယ်ဖို့တာဝန်ပါ။ တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပဲ
ဆန်ဂျနာနဲ့ မေဂျာရမ်ရဲ့အဖေတူအမေကွဲညီ လက်ရှ်မန်းတို့သားအမိဟာ ဒါဂျီလင်မြို့မှာ ရှိနေပါတယ်။
ဆန်ဂျာနာက စစ်သားတွေကို မုန်းတဲ့သူဖြစ်တာမို့ မေဂျာရမ်ဟာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ် အသွင်ယူပြီး ကာကွယ်ပေးဖို့လုပ်ရင်း တစ်ဖက်မှာ
သူ့အဖေရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ သူ့ညီနဲ့ သူ့မိထွေးကို ရှာပုံတော်ဖွင့်ပါတော့တယ်။ ထို့နောက် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့
၃ နာရီကျော်ကြာမြင့်တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်မှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ပါ။
Action, Bollywood, Comedy, Drama
Coffee or Tea ( 2020 )
Entrepreneur ကိုမစိမ်းကြပေမယ့် social entrepreneur ကို စိမ်းနေကြတဲ့သူတွေ
ဇာတ်ကားလေးက ကောင်လေး၃ ယောက်ကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာပါ
တစ်ယောက်က ငယ်စဉ်တည်းက ငွေမက်ပြီး ရောင်းလို့ရသမျှအကုန်ရောင်းပြီ
း စီးပွါးရေးတွေလုပ်လာခဲ့သူပေါ့… ဒါပေမယ့် သူလုပ်ငန်းတိုင်းကြာရှည်မမြဲခဲ့ပါဘူး
ဒီလိုမမြဲလို့လည်း သူအိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး စိတ်ရောဂါဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးမှု ခံယူနေရတယ်…
နောက်တစ်ယောက်က ရွာကနေ မြို့တက်ပြီး ပါဆယ်လိုက်ပို့သူ delivery man
အလုပ်ကို ဂုဏ်ယူစွာ လုပ်နေသူတစ်ယောက်။ သူက တစ်နေ့မှာ ရုတ်တရက်ကြီး
အလုပ်ကထွက်လိုက်တယ်။ အကြောင်းကတော့ သူ့ရွာလေးကို
ပြောင်းလဲပေးချင်လို့ သူရွာပြန်ပြီး ပါဆယ်ပို့လုပ်ငန်းလုပ်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ပြီး ရွာပြန်လာသူပေါ့…
ဒီလိုပဲ မြို့ကနေ ရွာပြန်လာသူတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။
ကော်ဖီလုပ်ငန်းလုပ်ချင်စိတ်ပြင်းပြနေသူပေါ့… ဒါပေမယ့် ကော်ဖီစိုက် ကော်ဖီကျိတ်
ကော်ဖီနှပ်ချင်ပေမယ့် စီးပွါးဖြစ်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိသူတစ်ယောက်ပါ။
ဒီလို ၃ ယောက် ပေါင်းစည်းပြီး ဘယ်လိုတွေ society ကိုအကျိုးပြုအောင်
စွန့်ဦးတီထွင်လမ်းဖောက်တယ်ဆိုတာ သေချာလေ့လာရင် လေ့လာသလို ပညာရတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ…
The Night 2021
အိမ်တစ်အိမ်ထဲမှာ မိသားစု၃စု မာဖီးယားဂိမ်းကစားနေကြပါတယ်။
ကစားပွဲမှာရှုံးတဲ့အတွက် စည်းမျဉ်းအရအသတ်ခံလိုက်ရသူကတော့ နမ်ဒါပါ။
နမ်ဒါက ခင်ပွန်းသည်ဖြစ်တဲ့ ဘာဘတ်ကို
နောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့ သူသေရင် သမီးဖြစ်သူကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကစားပွဲဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးက စစနောက်နောက်ပါပဲ။
ဘာအဓိပ္ပာယ်မှန်းမသိဘဲ ဆင်တူတက်တူးထိုးထားမိတဲ့ ဘာဘတ်နဲ့ နမ်ဒါတို့လင်မယားနှစ်ယောက်
လသားအရွယ် သမီးလေးနဲ့ အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့လမ်းမှာ
သူတို့ ၂ယောက်ရဲ့ တက်တူးတွေကပဲ ကျိန်စာမိနေတာလား…?
၂ယောက်သား ကိုယ်စီဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အတိတ်တွေကပဲ သူတို့ကိုခြောက်လှန့်နေစေတာလား…?
ဒါမှမဟုတ် တည်းခိုမိတဲ့ဟော်တယ်ကပဲ သူတို့ကိုခြောက်ခြားစေဖို့ ဖန်တီးထားတာပဲလား…?
ဆိုတာကို ဒီကားလေးထဲမှာ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်ရှုခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Molins Film Festival မှာ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆု၊ အကောင်ဆုံး အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု၊ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ညွှန်းဆု ၃ ဆု ရထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်တာကြောင့် လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်း။
ဇာတ်ကားမှာတော့ ဘာဗာနီဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတစ်ယောက် သူ့မိဘ၂ပါးလုံးအသတ်ခံလိုက်ရပေမယ့်
အကြောင်းကတော့ သူ့မိဘကိုသတ်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင် ခြိမ်းခြောက်ထားလို့ပါ
ဒီလိုနဲ့ လူငယ်ပြုပြင်ရေးစခန်းရောက်ပြီး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရပေမယ့် အကြံကြီးတဲ့လူငယ်လေးကတော့
ဒီလိုနဲ့ လမ်းစတစ်ခုရပြီးအဆင်ပြေပြေ လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်
နောက်တစ်ဘက်မှာလဲ ကောလိပ်ကျောင်းက ကျောင်းအုပ်တွေ ကျောင်းကောင်စီဝင်တွေ ကြည့်မရပေမယ့်
ကျောင်းသားတွေတုန်နေအောင်ချစ်တဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ JD ဆိုတာရှိပါတယ်
သူကတော့မှန်လွန်းနေတဲ့ လူမှန်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ကျောင်းကောင်စီဝင်တွေက သူတို့လမ်းမှာ
ဒီလိုနဲ့ JDနဲ့ ဘာဗာနီ ကြားဘာတွေဆက်စပ်မှုရှိလာမှာလဲ
အိန္ဒိယကားတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေလဲပါဝင်တဲ့ကားလေးမို့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်
Action, bollywood, Crime, Thriller
IMDb Rating (7/10) ထိရရှိထားတဲ့ Action, Crime, Drama အမျိုးအစား Bollywood ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ထူးဆန်းတာက Rotten Tomatoes မှာ (100%) Rating ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
Hrithik Roshan (လက်ပွားမင်းသား) နဲ့ မင်းသားကြီး Sanjay Dutt တို့အဓိကအားပြိုင်ထားပါတယ်။
မင်းသမီးတွေကလဲ တကယ့်ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့
Priyanka Chopra နဲ့ Katrina Kaif တို့ တပြိုင်တည်းပါဝင်ထားပါတယ်။
မင်းသား ၊ မင်းသမီး ၊ Rating တွေမြင်တာနဲ့တင် ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Kilometers and Kilometers (2021)
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ထူးထူးခြားခြား အိန္ဒိယသားကောင်လေးနဲ့ အမေရိကန်သူကောင်မလေးရဲ့
အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ comedy drama အမျိုးအစားဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။
ဂျို့စ်မွန်မှာ အဖေမရှိတော့ပါဘူး သူ့အမေနဲ့ညီမကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် အလုပ်တွေမျိုးစုံလုပ်ပေမယ့်
တစ်နေ့ကျ ညီမရဲ့ကျောင်းစရိတ်နဲ့ အိမ်ချေးငွေတွေကို ဆပ်ဖို့လိုလာပါတယ်။ သူ့မှာပိုင်ဆိုင်တာဆိုလို့ ဆိုင်ကယ်ပဲရှိတာပါ။
အဲဒီဆိုင်ကယ်ကို သူကအရမ်းတွယ်တာပါတယ်။ သူ့အဖေဆိုင်ကယ်လည်းဖြစ်လို့ ဘယ်လိုမှမရောင်းရက်ဖြစ်နေပေမယ့် မတတ်သာလို့
ကံကောင်းချင်တော့ အဲဒီအချိန်မှာ အမေရိကန်သူလေးကတ်သီက
ကာစီနိုကနေပိုက်ဆံတွေအများကြီးရခဲ့လို့ အိန္ဒိယကိုလာလည်ပါတယ်။ သူကဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့အိန္ဒိယကိုပတ်သွားချင်တယ်ဆိုပြီး
ဂျို့စ်မွန်ကို ပိုက်ဆံတွေအများကြီးပေးပြီး ဒရိုင်ဘာအဖြစ်ငှားလိုက်ပါတယ် ဂျို့စ်မွန်လည်းဆိုင်ကယ်မရောင်းရတော့ဘူးပေါ့။
တစ်နေ့ သူတို့ခရီးသွားနေတုန်း ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးအခိုးခံရပြီးတော့ ဒုက္ခရောက်ကြပါတော့တယ်။
ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြမှာလဲဆိုတာကတော့ ဆက်ကြည့်လိုက်ပါတော့နော် ဒီကားလေးကတော့ တကယ်ကောင်းတဲ့
dramaကားလေးလို့ပြောလို့ရပါတယ် ခရီးသွားပုံစံတွေကိုလည်း မြင်ရတာဖြစ်လို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းမယ့်
အချစ်ကားလေးတစ်ကားလည်း ဖြစ်လို့ ညွှန်းပေးလိုက်ရပါတယ်
Action, Adventure, bollywood, Drama
Escape Room ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေး‌ကတော့ 2019 ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ကားလေးဖြစ်ပြီး IMDb rating အနေနဲ့လည်း 6.4/10 ရထားတာဖြစ်ပါတယ် ။
ဇာတ်ကား အကျဉ်းချုံးကို ပြောရမယ်ဆိုရင် အမည်မသိ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာ လူအချို့ကို သူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေ အကြောင်းစုံ စုံစမ်းထားပြီး ပဟေဠိသေတ္တာတုံးလေးတွေ ပေးပို့ကာ သူတို့ရဲ့ ပြိုင်ပွဲကို ဒေါ်လာ 10000 အတွက် လာရောက်ယှဥ်ပြိုင်စေခဲ့ပါတယ် ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရောက်လာပြီး လာပြိုင်တဲ့ သူတွေဟာ အလုံပိတ် အခန်းတစ်ခန်းအတွင်းကနေ လွတ်အောင် သဲလွန်စတွေ ရှာကာ နောက်ဆုံးအခန်းရောက်ပြီး လွတ်သည်အထိ ဆော့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ကစားခန်း တွေဟာ သူတို့ထင်ထားသလို အပျော်သဘောမျိုး ဆိုတာထက် တကယ့်အစစ်အမှန် အသက်သေဆုံးခြင်းတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုနောက်ဆုံးအထိ အသက်ရှင်ကျန်ပြီး နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူတွေဟာဘယ်သူလဲ ဆိုတာကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရမှာပါ ။ လူတွေဟာ ဘယ်လောက်ထိ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန် သလဲ မိုက်ရူးရဲဆန်သလဲ အတ္တကြီးသလဲ ဆိုတာကိုပါ ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
Action, Adventure, Horror, Mystery, Thriller
သူတို့(၃)ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဟာ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်လိုက်မိလို့
နောက်တစ်ခုက ဒဏ်ရာရတဲ့လူနာနဲ့ လူနာရှင်တွေဟာ ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး..
သူတို့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဉီးကိုပြန်ပေးဆွဲပြီး မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ပါတယ်…နစ်နာသူအမျိုးသမီးဟာ ရဲစခန်းကိုအမှုဖွင့်
တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်…အတိုင်ခံရတဲ့ မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်သူတွေထဲမှာ မြို့ရဲ့အာဏာရှိလူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့တူတစ်ယောက်ပါဝင်နေတာကြောင့်
အင်အားကြီးသူနဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့နေတဲ့နစ်နာသူမိန်းကလေးတို့ ယှဉ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး…
ဒါပဲမဲ့ အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် ကင်းကွာနေတဲ့ နာမည်ကြီးရှေနေတစ်ဦးဟာ မိန်းမငယ်သုံးယောက်ရဲ့ ဒုက္ခကိုသိရှိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့…
My God Father (2020)
ဂေါ့တ် အဖြစ် Pope Thanawat
ပရိမ်အဖြစ် Ter Chantavit
ဘျု့အဖြစ် Sammy Cowell
ပြိုင်ကားမောင်းရတာ ဝါသနာပါတဲ့ ဂေါ့တ်တစ်ယောက်က စိုးရိမ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတခွန်းနဲ့ သူ့အိပ်မက်တွေကို တားဆီးနေခဲ့တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ အဆင်လုံးဝမပြေခဲ့ပါဘူး
ငယ်စဉ်အရွယ်ထဲက ဖခင်ထောင်ကျလို့ မိခင်ဖြစ်သူ သတ်သေခဲ့တယ်ဆိုပြီး ဖခင်ကို အမုန်းကြီးမုန်းနေခဲ့တဲ့ ဂေါ့တ်တစ်ယောက် ကားမတော်တဆဖြစ်ခဲ့ချိန်မှာတော့ အရင်အချိန်တွေကို ပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်
ဂေါ့တ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကတော့ ၁၉၉၈ ခုနှစ် သူမမွေးဖွားလာခင် တစ်နှစ်အလိုကိုပါပဲ
ဖခင်ဖြစ်လာမယ့် ပရိမ်ဖြစ်သူနဲ့ သူငယ်ချင်းအဖြစ်တွေ့လာရပြီး ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ခံယူချက် အတွေးအမြင်တွေနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကြား ဘာတွေကများ အထင်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်လာစေခဲ့သလဲ
အဖေလို့တောင် မခေါ်ခဲ့တဲ့ ဂေါ့တ်တစ်ယောက် ဖခင်ဖြစ်သူ “ပရိမ်”ရဲ့ စိတ်ရင်းကို သိလာနိုင်မလားဆိုတာကို ဟာသနှောပြီး တင်ဆက်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Love, Lost & Found (2021)
IMDb Rating – 5.6/10
မထင်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ အချစ်ဆိုတာ ပေါ်လာတတ်တယ်လို့လူတွေပြောကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ့်အနားမှာ
တစ်ချိန်လုံးရှိနေပေမယ့်လည်း ဒါဟာ အချစ်စစ်ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်လိမ့်မယ်။ တသစ်ဒင်္ဂလေး တွေ့လိုက်ရုံနဲ့ အချစ်စစ်တွေ
တစ်ချို့ကျလည်း အချစ်ဦးဆိုတာကို မေ့ပျောက်မရနိုင်ဖြစ်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ ဆက်မချစ်တတ်ကြတော့ပါဘူး။
အချစ်ဟာ အဲ့ဒီလောက်ထိကို ဆန်းကြယ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာလည်း ဘက်ဖ်ဆိုတဲ့ လူဟာ သူ့ရဲ့ ချစ်သူ ကလဲရ်ရဲ့ ဇာတိမြေလေးကို သွားပြီး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းဖို့
ကြံစည်ထားခဲ့ပါတယ်။ နေ၀င်တာကို ကြည့်ရင်း လက်ထပ်ခွင့်တောင်းမယ့် အချိန်မှာပဲ ကံဆိုးစွာနဲ့ ကလဲရ်က တောင်စောင်းပေါ်က
ပြုတ်ကျပြီး မြစ်တစ်လျှောက် ပါသွားပါတော့တယ်။ ချစ်သူကို စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ပြူးပျာနေတဲ့ ဘက်ဖ်လည်း တောင်ပေါ်က တလိမ့်
ခေါက်ကွေး ပြုတ်ကျပြီး နတ်တလီဆိုတဲ့ တောခေါင်းမလေးနဲ့တွေ့…..
ဘက်ဖ်ရဲ့ ချစ်သူ ကလဲရ်နဲ့တွေ့တဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့က လူဟာလည်း ကလဲရ်ရဲ့ ရည်းစားဟောင်း ကော့တ်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
ဒီအတွဲလေး ၂ တွဲ ဘယ်လိုလဲ ပြန်ဆုံမယ် ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာကတော့ စိတ်၀င်စားစရာပါပဲ လူလေးယောက်တည်းနဲ့
တစ်ကားလုံးကို စိတ်၀င်စားအောင် ရိုက်ပြထားတာတော့ တကယ်ချီးကျူးစရာပါ။
ဇာတ်ကားလေးကြည့်ရင်း အချစ်ဦးကို သတိရစေမှာဖြစ်သလို အချစ်ဆိုတာ မမျှော်မှန်းထားတဲ့ အချိန်မှာ ပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုတဲ့
IMDb Rating – 4.9/10
အသစ်ထွက်တဲ့ Drama, Horror, Thriller ဇာတ်ကားပါ။ ကျွန်တော်တို့အခေါ်တော့ Psycho ကားလို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ ဖောက်ပြန်တဲ့ ဇနီးကိုသတ်တဲ့အမှုနဲ့ ထောင်ကျခံနေရချိန်မှာ တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့ စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန် ဒေါက်တာ ရိတ် ရဲ့ တိုက်ပိတ်ခံရခြင်းအတွေ့အကြုံကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အလုံပိတ်ခန်းထဲမှာ နေရတာ ဘာခက်တာလဲလို့သိချင်ရင် ဒါကိုကြည့်လိုက်ပါ။ သူကတော့ ရက် ၁၀၀ ကျော်နေသွားတဲ့အကြောင်းကို ပြသွားပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်း တသီးတခြားနေရင်း ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ တာဝန်ကျအရာရှိရဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေကို ကြုံတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ ဒီဒဏ်တွေကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မလား ဒါမှမဟုတ် တိုက်ပိတ်ခံထားရသူ ဦးရေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံ ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတိုင်း ရူးရင်ရူး မရူးရင်သေဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်သွားမှာလား။ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ရပ်တွေ မဟုတ်ဘဲနဲ့ သူတို့ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေ တစ်နည်းအားဖြင့် သတ်ခဲ့တဲ့သူတွေက ပြန်လည်ခြောက်လှန့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ သီးခြားချုပ်ဆောင်ရဲ့ ပါးစပ်ပြောရာဇဝင်အတိုင်း သူသတ်ခဲ့တဲ့ ဒါမှမဟုတ် သူသတ်ခဲ့ပါတယ်လို့ စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ သူ့ရဲ့ဇနီးက လာရောက်ခြောက်လှန့်နေတာလား။ နံရံပေါ်မှာထင်နေတဲ့ အရာလေးက ရေကွက်လေးပဲလား။ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့မျက်နှာလား။ သူက သူ့မိန်းမကို တကယ်သတ်ခဲ့တာလား။ ဖြစ်ရပ်မှန်မဟုတ်ပေမဲ့ အချက်အလက်တွေကို အခြေခံရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့အခြေအနေနဲ့ သူ့အမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကို ရောပြီးရိုက်ပြသွားတာက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။
Brothers by Blood(2021)
Brothers by Blood(2021)အညွှန်း
ဒုစရိုက်မှုတွေများပြားလှတဲ့ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားမြို့နေ အိုင်းရစ်မာဖီးယားဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ရဲ့ သားဖြစ်သူ
ကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့ အကိုဝမ်းကွဲဖြစ်သူ မိုက်ကယ်က ဂိုဏ်းကိုဆက်လက်ဦးဆောင်နေပြီး
စားကျက်လုရင်း ငြိကြပါတော့တယ်။ အကိုဝမ်းကွဲမိုက်ကယ်ရဲ့ တဇောက်ကန်းလုပ်ရပ်တွေအကြောင့်
အခြေအနေတွေက ပိုဆိုးလာသလို၊ ပီတာ့ အနေနဲ့ မိမိဖခင်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်မှန်
ကိုသိရှိလာရမှာဖွစျပွီး၊ နောကျဆုံးမှာ ပီတာ့အနနေဲ့ အန်တရယျတောထဲကိုဝငျရောကျဖွရှေငျးဖို့
I Remember (2021)
၂၄ နာရီပဲ ရှိတဲ့ တစ်နေ့ ….
ကိုယ် တိတ်တိတ်လေး ကြိတ်ကြွေနေရတဲ့လူကို ၂၄ နာရီပဲ တွဲခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ခင်ဗျား ဘာလုပ်မှာလဲ?????
ပျော်ပျော်ကြီး တွဲမှာပေါ့ဗျာ။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား?
အဲဒီတစ်နေ့ ကျော်သွားတာနဲ့ သူက ဘာကိုမှ မမှတ်မိတော့ဘူးဆိုရင်ရော …..
သူ မှတ်မိခြင်း မမှတ်မိခြင်းထက် ကိုယ် မှတ်မိဖို့ပဲ လိုတာပေါ့ဗျာ။
တစ်နေ့ဆိုလည်း အဲဒီတစ်နေ့ကို အမှတ်တရထားမှာပေါ့။
အမှတ်တရ ဆိုတာ တစ်နေ့ဆိုလည်း အမှတ်တရက အမှတ်တရပါပဲ။
ကိုယ်ချစ်တဲ့လူရဲ့အကြောင်းကို အစစအရာရာကို မှတ်မိနေတဲ့လူအတွက်က တစ်ရက်ဆိုလည်း အဲဒီတစ်ရက်စာဟာ သူ့အတွက် တစ်သက်လိုပါပဲ။
အဲဒီတစ်ရက်ကို သူသာ မှတ်မိခဲ့မယ် ဆိုရင်ရော …..
မှတ်မိမလား မမှတ်မိဘူးလား ဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ တွေ့ရမှာပါ။
ကိုယ့်မှာ ကားမရှိပေမယ့် သူ့မှာ ကားရှိတော့ ကားပါကင်နဲ့ ရင်းနှီးလာတယ်။
သူ့အကြိုက်ဆုံး သီချင်းကို ဓာတ်လှေကားက သီချင်းဖွင့်တဲ့လူကို အကူအညီတောင်းပြီး ဖွင့်ပေးတယ်။
ဒါမျိုးကို “ရိုတယ်” လို့ သတ်မှတ်ရင် ဒီကားက အတော်လေး ရိုတဲ့ကား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီ့ထက် ရိုတာလေးတွေလည်း တွေ့ရဦးမှာပါ။
တစ်ရုံးလုံး မမှတ်မိတဲ့ သူ့နာမည် “ဖေ့လိ” ကို သူ ကြွေရတဲ့ ကျောက်ရှီးမန် ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက ခေါ်တဲ့အချိန်က စလို့
ဖေ့လိ တစ်ယောက် ကျောက်ရှီးမန် ကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ နေလာလိုက်တာ ……
ကျောက်ရှီးမန် က ဖင်လန် နိုင်ငံက Aurora ကို ချစ်ရသူနဲ့ အတူ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ အိပ်မက် ရှိပါတယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ သူ့အိပ်မက်တွေကို သူ့ရည်းစားဖြစ်သူက ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်။
ဖင်လန်နိုင်ငံကို ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ မမျှော်လင့်တာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
ကျောက်ရှီးမန် တစ်ယောက် မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီး အတိတ်မေ့သွားခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒါဟာလည်း တစ်ရက် ပါပဲ။
အဲဒီတစ်ရက်အတွင်းမှာ သူမနဲ့ အတူရှိခွင့်ရတဲ့သူက “ဖေ့လိ” ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ ………
ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ နာမည်ကြီး ထိုင်းရုပ်ရှင် “One day” ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအနေနဲ့ AngleaBaby က ပါဝင်ရိုက်ကူးပေးထားပါတယ်။
AngelaBaby က မြန်မာနဲ့ သိပ်စိမ်းတဲ့ မင်းသမီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
First Time, Love O2O, General and I ဇာတ်လမ်းတို့နဲ့ ရင်းနှီးကြပါလိမ့်မယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းကိုတော့ အမြန်ဆုံး ကြည့်ရအောင် စီစဉ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Download Channel Mandalay andorid apk
Channel Mandalay: Since 2019 Privacy & Teams of use
Member id ထည့်ရန်